Amanqaku kaJessica Theifels Martech Zone |
Amanqaku ngu UJessica Theifels
UJessica Thiefels ubhale ngaphezulu kweminyaka eyi-10 kwaye okwangoku ngumbhali osisigxina, umcebisi wentengiso kunye nomnini weshishini. Ubonakalisiwe kwiForbes nakwi-Business Insider kwaye ubhalele iVirgin, iManta, iBPlans nokunye.
Izixhobo ezi-5 eziMangalisayo zoThengiso lweMixholo encinci
NgoLwesibini, Januwari 23, 2018 UJessica Theifels
Ndizibona ndisisinhanha kwintengiso yomxholo. Andizithandi iikhalenda ezintsonkothileyo, iishedyuli kunye nezixhobo zokucwangcisa-kum, zenza ukuba inkqubo ibenzima ngakumbi kunokuba ifuna ukuba njalo. Ukungathethi, benza ukuba abathengisi bomxholo babe ngqongqo. Ukuba usebenzisa iinyanga ezi-6 zokucwangcisa izixhobo zekhalenda-inkampani yakho ehlawulayo-uziva unyanzelekile ukuba unamathele kuzo zonke iinkcukacha zeso sicwangciso. Nangona kunjalo, abona bathengisi babalaseleyo ba-agile, bakulungele ukutshintsha umxholo ngokujikeleza njengeeshedyuli